Warfaafino shaqada laga joojiyay Ciraaq - BBC Somali - Warar
Warfaafino shaqada laga joojiyay Ciraaq
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 28 Abriil, 2013, 13:21 GMT 16:21 SGA
Ammaanka Ciraaq ayaa aad u xumaanaya iyadoo ay sii socdaan qaraxyada.
Dowladda Ciraaq ayaa joojisay ruqsadii shaqada ee toban telefishin, iyadoo ku eedeysay inay ku eedeysay inay dhiirigalinayaan dagaal ku salaysan mathab.
Sarkaal ka tirsan dowladda ayaa sheegay in telefishanada ay shaqada joojinayaan.
Telefishanada Shaqada laga joojiyay waxaa ka mid ah Al- Jazeera oo beenisay eedaynta dowladda.
Isagoo cambaaraynaya dagaal dhawaan ka bilaabmay Ciraaq oo ay ugu yaraan laba boqol oo qof ay ku dhinteen, Ra'iisalwasaaraha Ciraaq Nouri Maliki ayaa ka digay in dagaalo ku salaysan mathab ay qatar galinayaan waddanka.